डिएफओ सर, डढेलोले वन खाई सक्यो, निभाउन जाउँ न ! – गाउँपालिका
डिएफओ सर, डढेलोले वन खाई सक्यो, निभाउन जाउँ न !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०८, २०७५ समय: २३:५०:०६
लेखक : तुलसी प्रसाद कोईराला
गाईघाट । असोजको दोस्रो हप्ता उदयपुर सरुवा भई आएका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख विष्णु प्रसाद आचार्यले आफ्नो कार्यक्षेत्रका ९० प्रतिसत भन्दा बढि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सँग पुगेर अन्तरक्रिया तथा छलफल गरे । आफु भन्दा सिनियर बन अधिकृतलाई चक्मा दिएर उदयपुर आएका आचार्य जिल्ला आएपछिको क्रियाकलाप हेर्दा वन संरक्षण गर्न सफल हुने अनुमान गरिएको थियो । डिभिजनल वन अधिकृत आचार्यले आफ्नो काम गर्ने शैली परिवर्तन नगर्दा एक पछि अर्काे विवादमा मुछिदै गएका छन ।
हरियो रुख काट्न अनुमती
बन जोगाउनु पर्छ भन्दा पनि घुमाएर रुख काट्नु पर्छ भनेर समूहलाई प्रशिक्षण दिने गरेका डिभिजन प्रमुखले २०६६ साल देखि कुनै वन अधिकृतले हिम्मत नगरेको काँचो सालको रुख काट्ने अनुमती दिएर आफ्नो असली स्वरुप प्रष्ट पारे । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला देश भर नै काठ काट्न र ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०६६ साल देखि रोकिएको हरिया सालको रुख काट्ने अनुमति दिने दुस्साहस कसैले गरेको थिएन । समूहकै माग अनुसार हरिया रुख काट्न दिएको बताउने डिभिजन प्रमुख आचार्यले आन्तरिक खपतको लागि भनेर उपभोक्ता समूहलाई हरिया रुख काट्न अनुमति दिएका बताउछन । आचार्यको भनाईमा वन उपभोक्ता महासंघ पनि सहमत छ । महासंघले समेत आचार्यको बोलीमा लोली मिलाएर उपभोक्ताको लागि भनेर हरियो रुख काट्न पाउनु पर्छ भनेकोले वनले निर्णय गरेको बताएको छ । समुहका उपभोक्तालाई नै भनेर किन हरियो रुख काट्नु पर्यो भनेर चित्त बुझ्दो जवाफ डिभिजन कार्यालय सँग छैन । दैनिक जसो स्थानीय पत्रपत्रिकामा आन्तरिक प्रयोजनको लागि काठ बिक्रि वितरणको सूचना आउछ । तर एक हप्ता पछि समुहको आन्तरिक खपत नभएकाले समूह बाहिर विक्रि वितरण गर्न भनेर अर्काे सूचना प्रकाशित हुन्छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको तर्कलाई विश्वास मान्ने अवस्था नै छैन । डिभिजन प्रमुखले जिल्ला दौडाहामा समूहका पदाधिकारी मात्र भेटेका हुन । समूहका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको माग अनुसार नै हरियो सालको रुख काट्न अनुमति दिएको भन्ने प्रष्ट छ । समूहका अध्यक्ष तथा सचिवहरु कसरी चलेका छन भन्ने कुरा जगजायर विषय हो ।
काठ चोरी तस्करी नियन्त्रणमा फितलो
डिभिजन वन अधिकृत आर्चाय आएपछि फाट्ट फुट्ट देखि बाहेक चोरी नियन्त्रण भएको छैन । यसको तथ्य डिभिजन वन कार्यालयले अभियोजन गरेको मुद्दाको संख्याले नै छलङ्ग पार्दछ । तर्क जे गरेपछि हुन्छ । डिभिजन वन अधिकृत आएपछि चोरी नियन्त्रण भएर मुद्दा दर्ता नभएको भन्न सकिन्छ तर वनका कर्मचारीको मुमेन्ट सुस्त भएको बेला कसरी चोरी नियन्त्रण भयो भनेर विश्ववास गर्ने ? चोरी नियन्त्रण भएको भए सदरमुकाम गाईघाटको फर्निचरमा कसरी काठको आपूर्ती भई रहेको छ भनेर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।
चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं. २ को वडा भवन बनाउन काचो सालको रुख काटियो । सहायक वन अधिकृतकै अनुमतिमा सालको रुख काटिएको संचार माध्यममा आउदा पनि डिभिजन वन कार्यालयले घटनालाई गभ्यिरयर्ता साथ लिएन । सार्वजनिक स्थानको सालको रुख काटन पाउ भनेर सव डिभिजन प्रमुखलाई भन्न जादाँ म रुख काटेको थाहा नपाए जस्तो गरेर बस्छु, तपाईहरु रुख काट्नु होस भनेर सल्लाह दिएको घटना समेत बाहिर आउदा डिभिजन वन कार्यालयले सहायक वन अधिकृत माथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेन । तर सोही विषयलाई वन विभाग र प्रदेश मन्त्रालयले संवेदनशिल रुपमा लिएर सप्तरी जिल्लाको डिभिजन वन अधिकृतलाई नै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । आफ्ना तल्लो तहको कर्मचारीको संरक्षण निश्चय रुपमा प्रमुखले नै गर्नु पर्छ तर अनुचित काममा समेत संरक्षण गरेर दण्डहिनतालाई थप टेवा पु¥याउने काम भएको छ । गलत गर्नेलाई कार्वाही र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने खराब मान्छे विस्तारै साईट लाग्दै जानेछन भने राम्राले अवसर पाउने थिए ।
डढेलो नियन्त्रणको प्रयास नै भएन
फेसबुक मित्र सिभिल बैकका शाखा प्रमुख संन्जय सिग्देलले शुक्रबार साँझ एउटा फोटो सहित पोष्ट गरे ‘हाम्रो वरिपरिका जंगल पुरै डढेलो लागेको छ । भोलि शनिबार, बिदाको दिन, बिहान डढेलो निभाउन जाम न है ।’ यो प्रंसङ्ग किन मैले राखे भने डिभिजन वन अधिकृत बिष्णु प्रसाद आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर र सूचना अधिकारी जागेश्वर साहको यो पंङ्गीकार पनि फेसबुकमा साथी छ । तर कसैले पनि अहिलेको समस्या डढेलो नियन्त्रणको लागि दुई शब्द खर्चका छैनन । वन सँग कुनै सरोकार नभएका एउटा बैकका कर्मचारीले वन डढेलो नियन्त्रण गर्न जाउ भन्दा लाज लाग्नु पर्ने होईन र वनको रक्षा गर्न जिम्मेवारी लिएका राष्ट्रसेवकहरुलाई ? समुहमा गएर गरेको भाषण गरेको फोटो दिनहुँ ट्याग हान्न सक्ने डिभिजन वन अधिकृतले डढेलो निभाउन किन आव्हान नगरेका होलान । सोच्ने पर्ने भएको छ ।
सव डिभिजन प्रमुख छैनन
डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले सायद डढेलोले बन सकिन लागो भनेर निभाउने कार्ययोजना बनाउन छलफल चाहि नगरेको होईन । शुक्रबार बिहान कार्यालयमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई बोलाएर डढेलोले वन सकिन लागो केही गरौ भनेर छलफल राखेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर अन्तरगत ८ वटा सव डिभिजन कार्यालयहरु छन । तर वन डढेलोले खाई सक्न लाग्दा समेत ८ वटै सव डिभिजन प्रमुखहरुको टुङ्ग छैन । उनीहरु कहाँ कहाँ के कस्तो अवस्थामा छन भन्ने डिभिजन वन कार्यालयललाई थाहा छैन । सहायक वन अधिकृत धर्मदेव ठाकुर बेल्टार, सत्यदेव यादब हडिया, दिलिप चौधरि रामपुर, सुरेन्द्र यादव गाइघाट, रामानन्द यादव खाँवु, विनोद साह मैनामैनी सबै जना बिदामा बसेको बुझिएको छ । बन संरक्षण गर्ने अधिकारी वन धेरै जोखिममा रहेको बेला फिल्डमा नहुनुले उदयपुरको बनमा आगो लगाएर बिदामा बसेको हुन सक्ने बजारको चिया पसलमा चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ । शुक्रबारको बन कार्यालयको बैठकको उपस्थितिले पनि सव डिभिजन प्रमुखहरु जिल्ला बाहिर रहेको थप पुष्टी गर्दछ । हुन त वन जोगाउने दायित्व वन कर्मचारीको भन्दा समूहकै हो तर राज्यको सिन्दुर लगाएपछि म वन जोगाउदिन भनेर वन कर्मचारीले भन्न पाउदैन । अन्त्यमा डिभिजन प्रमुख आचार्य सर बरु शनिबार तपाईहरु (सिडियो, एसपी, लगाएतका कार्यालय प्रमुख) को कुनै मनोरञ्जनको कार्यक्रम छ भने त्यसलाई रद्द गरेर बन डढेलो नियन्त्रण गर्न जाआंै बरु हामी पनि सँगै वन डढेलो निभाउला ।